Awoodda suuqa ee carbomer Qingdao waa mid weyn. Waxaa la ogaaday in shanta sano ee soo socota, ay jiri doonto 10.34 bilyan yuan suuq ah oo la horumarin doono sanadka 2025. Marka xigta, aan raacno qalabka cusub ee Qingdao yinuoxin
Carbomer waa isku-duwaha acrylic acid, iskutallaabta ama isku xidhka mid ka mid ah dhowr polyols allyl ethers. Xaruntani badanaa waa budo cad, oo loo isticmaalo wakiilka isku-darka iyo xasiliyaha emulsion. Waxay caan ku tahay codsigeeda warshadaha qurxinta waxayna leedahay codsi wax ku ool ah oo ku saabsan dhinacyada caafimaadka iyo caafimaadka. Hay'ado badan ayaa rumeysan in dhammaan noocyada kiimikooyinka ay aad u caafimaad qabaan, in kasta oo walxaha qaarkood loo isticmaalo in lagu takhaluso daawadooda pH ay dhibaato noqon karto
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, suuqa adduunka ee carbom ayaa si dhakhso leh u koray, celcelis ahaan heerka kobaca sanadlaha ah ee 11.98. Dakhliga adduunka ee Kapom waa ku dhowaad 736 milyan oo doollarka Mareykanka ah, oo xaddiga iibkiisa dhabta ah uu ku dhow yahay 57600 tan.
Kala soocida carbomer waxaa ka mid ah carbomer 940, carbom 980, kapom 934, iwm, iyo saamiga carbomer 940 ee sanadka 2018 waa qiyaastii 37.
Carbomer waxaa si weyn loogu adeegsadaa dawooyinka, daryeelka shaqsiyeed iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Carbomer waxaa loo isticmaalaa daryeelka shakhsi ahaaneed iyo is qurxinta, qiyaastii 54%.
Aasiyada Baasifiga waa waddan macaamiil ah oo leh suuq ku dhow 55.4. Intaa waxaa dheer, Waqooyiga Ameerika iyo Yurub waxay leeyihiin saami isku mid ah, oo ka dhigan 14.3 iyo 17.8 siday u kala horreeyaan suuqa macaamiisha
Awoodda horumarinta suuqa waa mid weyn. Miyaad qabatay fursadda suuqa ee carbom? Shirkadaha waaweyn ee Qingdao kapom waxay kugu soo dhaweynayaan inaad soo booqato shirkadeena oo aad kala hadasho arrimaha iskaashiga.